Namoaka Valim-pikarohana Ara-tsiansa Ny Saodianina iray Mpitondra Fivavahana Hanehoany Hoe Maninona Ny Vehivavy No Tsy Tokony Hitondra Fiarakodia. · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 05 Oktobra 2013 4:56 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Deutsch, عربي, Svenska, Français, Português, Magyar, Italiano, Català, English
Any Arabia Saodita, ny vehivavy dia voarara tsy hitondra fiarakodia. Raha vehivavy maherin'ny 11,000 no miady amin'ilay fandrarana amin'ny alalan'ny fanangonan-tsonia, ity lehilahy iray manana fahendrena lehibe kosa dia tonga miaraka amin'ny fanazavana ara-tsiantifika hoe maninona amin'izao fotoana izao no tsaratsara kokoa ho an'ireo vehivavy ny tsy mamily fiarakodia. Ao anaty fanadihadiana iray niaraka tamin'ny gazety Saodianina Sabq ety anaty aterneto, Sheikh Saleh al-Lehaydan, izay mpanara-maso ara-pitsarana sy ara-psikolojika ao amin'ny fikambanana “Gulf Psychological”, dia namoaka voka-pikarohana siantifika mikasika ny fiterahan'ny zanak'olombelona [ar].
Eman al-Nafjan dia nibitsika sary iray amin'izay ho fahapotehana ho avy eo:
Tsy afaka nafenina ny vokatry ny fikarohan'i Sheikh al-Lehaydan. Fahombiazana no azon'ny tenifototra iray ao amin'ny Twitter #قيادة_المرأة_تؤثر_على_المبايض_والحوض, izay midika hoe “ny fitondran'ireo vehivavy fiara dia misy fiatraikany any amin'ny fihary atodinaina sy ny valahany” ary niparitaka be satia maro no naneho hevitra tamin'ny fahalalàna ara-tsiansa ananan'i al-Lehaydan.
at times like this i understand why people commit suicide قيادة_المرأة_تؤثر_على_الم#بايض_والحوض
Rehefa ohatra izao dia azoko tsara hoe ny antony amonoan'ny olona tena يادة_المرأة_تؤثر_على_الم#بايض_والحوض
Fa maninona no tsy afaka mamily fiarakodia ireo vehivavy Saodianina? Manimba ny fihary atodinaina sy ny valahin'izy ireo izany. http://t.co/r1BnHWrLDC Ah HITAKO, tsy resa-pinoana izany fa SIANSA.
@RichardDawkins Izany no ahazoan'izy ireo izany. pic.twitter.com/rWrxPQ2FkI
Esorintsika ireo hanihany mandratra fo, ady efa hatry ny ela ny fiadiana amin'ilay fandrarana ny familiana fiarakodia any Arabia Saodita. Raha zohina, ny tsy hetsi-panoherana voalohany an'ilay fandrarana dia nitranga tamin'ny Novambra 1990 rehefa nitondra fiarakodia namakivaky an'i Riyadh renivohitra ny vehivavy miisa 47. Tsy nosamborina fotsiny izy ireo, fa maro ihany koa ireo nosaziana mafy ka noraràna tsy hivezivezy ary natsahatra tamin'ny asany. Ny volana Mey 2011 no fotoana tena nanamarika ny fihetsiketsehana fanoherana ny fandrarana ny vehivavy tsy hitondra fiara tao anatin'ny Fanjakana, taorian'ny fisamborana an'i Manal al-Sharif, izay mpitolona, noho ny nandefasany tao amin'ny YouTube ny horonantsary iray nahitàna azy mitondra fiara. Nogadraina mihoatra ny herinandro izy io, ary lasa olona mahery fo no nandraisan'ireo vehivavy maro azy, na tao Arabia Saodita, na tany amin'ny faritra Afovoany Atsinanana. Tany amin'ny volana Jona 2011, nanaraka ny ohatra nomen'i Manal al-Sharif daholo ireo vehivavy Saodianina rehetra manerana ny Fanjakana ka nandray anjara tamin'ilay fanentanana “Women2Drive” tamin'ny alalan'ny fitondrana fiarakodia namakivaky ny làlana maro.
Raha ny marina, dia tsy voasoratra na aiza na aiza ao anaty lalàn'ny Fanjakana ny fandraràna ireo vehivavy amin'ny familiana fiarakodia. Fanampin'izany, ny mpitondra ara-pivavahana tao Arabia Saodita dia niteny ihany koa hoe “ny sharia Islamika dia tsy ahitana lahatsoratra mandràra ny familiana fiarakodia ho an'ireo vehivavy “, manamafy izany, nanomboka tamin'ny nanendrena azy ho filohan'ny Komitin'ny Fampiroboroboana nySoatoavina sy ny Fisorohana ny Ratsy, ny mpitandro filaminana ara-panahy dia tsy afaka nanenjika na nanjanona vehivavy mitondra fiarakodia. Noho izany dia mifototra tanteraka amin'ireo fomba fanao mifikitra amin'ny netin-drazana ao amin'ny firenena ilay fandraràna.
Nanomboka tamin'izay dia nihamafy ny fihetsiketsehana hiadiana amin'ilay fandraràna an-terisetra ary nitombo ireo fihetsika tsy manaraka baiko ataon'ireo olon-tsotra. Miaraka amin'ireo fipetraka sahisahy noraisiny any amin'ny haino aman-jery malaza any Arabia Saodita, ilay fanentanana ho an'ny 26 Oktobra dia nahita fanohanana be dia be avy amin'ireo olom-pirenena maro. Ilay olo-miavaka, Madeha Al-Ajroush, izay nitondra fiarakodia tamin'ny taona 1990 sy tamin'ny volana Jona 2011 dia niteny hoe:
Mampiasa ny tenifototra Twitter #أنا_رجل_مؤيد (“Lehilahy manohana aho”), manomboka maneho ny fanohanany ampahibemaso ihany koa ireo lehilahy:
[#أنا_رجل_مؤيد] Lehilahy manohana ny familiana fiara hataon'ny vehivavy ny 26 Oktobra aho. [#أنا_رجل_مؤيد] Bitsika ampiasàna sary.
Araka ny nametrahan'i Manal al-Sharif azy fony nahazo fankasitrahana tamin'ny “creative dissent” (fanoherana mitondra zava-baovao) tany amin'ilay Fihaonambe momba ny Fahalalahana tany Oslo: “Manomboka amin'ny erika iray ny orana”. Toy ny hoe ny lanitra iray manontolo ao Arabia Saodita no sembanan-drahona.
Leila Nachawati no nanome ity ampahany ity.